हामी पुस भित्रसम्ममा मलेसियामा शाखा खोलि सक्छौं, बैंकको सेवा थप सुचना तथा प्रविधियुक्त बनाउने योजनामा अघि बढ्दै छौंं - Artha ko Artha
हामी पुस भित्रसम्ममा मलेसियामा शाखा खोलि सक्छौं, बैंकको सेवा थप सुचना तथा प्रविधियुक्त बनाउने योजनामा अघि बढ्दै छौंं
हिमालयन बैंक लिमिटेडले मलेसियामा सम्पर्क कार्यलय खोलने अनुमति पाएको छ । अब बैंकको रणनीति कस्तो रहन्छ ?
हिमालयन बैंक लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मलेसियामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ । बैंकले यस अघि नै मलेसियाको केन्द्रिय बैंक (बैंक नेगारा मलेसिया) बाट पनि सो सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हामीे मलेसियामा आगामी पुस मसान्त भित्रै आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्ने प्रकृया शुरु गरिसक्ने छौं । मलेसियामा बैंकको सम्पर्क कार्यालय खुले पछि मलेसिया र नेपाल वीच व्यापार अभिवृद्धि, विप्रेषण प्रबर्धन तथा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका सम्भावनाका अवसरहरु जुटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने विश्वास गरेको छु । यसका साथै हामीे निकट भविष्यमै खाडी मूलुकहरुमा समेत सम्पर्क कार्यालयहरु खोल्ने र सम्पर्क कार्यालयको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गर्ने योजनामा रहेका छौं ।
तपाईँहरुको बैंकले हिमाल रेमिटमार्फत पनि विप्रेषण भित्राउने कार्य गर्दै आएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्ने कस्तो योजना रहेको छ ?
मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणबाट चलिरहेको अवस्था छ । तर विप्रेषण आउने माध्यम दुई प्रकारका छन् । हुण्डी र बैकिङ च्यानल मार्फत । बैकिङ च्यानलबाट विप्रेषणको आप्रवाहलाई प्रोत्साहन हामीले गर्नैपर्छ । हिमाल रेमिटले त्यही गर्दै आएको पनि छ । हाल बैंकको देशभर ४२ वटा आफ्नै शाखा तथा विप्रेषण भुक्तानीका लागि ५ हजार ४ सय भन्दा बढी हिमाल रेमिट भुक्तानी केन्द्र संचालनमा रहेका छन् । यसैगरी बैंकको विश्वभर १०० भन्दा बढी व्यवसायिक सहयोगी संस्थाहरु रहेका छन् । आगामी दिनमा हामी यसलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा छौं ।
बैंकिङ गर्ने पद्धति र बैंकले दिने सेवाहरु फरक हुँदै गएको छ । यस हिमालयन बैंकले चाँही आफ्नो ग्राहकहरुलाई कस्तो सेवा दिने छन् त ?
हेर्नस्, अहिलेको समय भनेको सुचना प्रविधिको समय हो । त्यसैले पनि हिमालयन बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि समयसापेक्ष अनुरुपको सुचना प्रविधिमा आधारित बैकिङ सेवाहरु दिदै जाने प्रयासमा सदैव लागी परेको छ । हामी केहि दिन मै नयाँ सेवा संचालनमा ल्याउने तयारीमा छौं । यस सेवाबाट होटल, ट्राभल एजेन्सी लगाएत ई कमर्सको व्यवसाय गर्नेहरुले अनलाईन मार्फत नै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै हामी यहि पौषमसान्तमा मोबाइल बैकिङ सेवा पनि संचालनको तयारीमा रहेका छौं । यो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा हामी शाखा रहित बैंकिङ सेवा पनि शुरु गर्ने छौं । जसबाट हाम्रो बैंकको सेवाको पहँुच ग्रामिण क्षेत्रमा पनि विस्तार हुनेछ ।
यस बैंकको मुनाफा आर्जन गत वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीहरुलाई कति प्रतिफल देला त ?
बैंकको अब बस्ने २२औं वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट २१ दशमलब ०५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय बैंकको संचालक समितिले गरेको छ । जसमा १५ प्रतिशत नगद लाभांश र ६ दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ । यो लाभांश घोषणाको स्विकृतिका लागि हामीले केन्द्रिय बैंकमा पठाएका छौं । गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो बैंकको खुद मुनाफा आर्जन १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रहेको थिया । यहि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि बैंकले २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा अर्जान गरेको छ ।
चालु आ.व को पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको खुद मुनाफा आर्जनमा भएको वृद्धिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैैंकहरुले करिब १८ प्रतिशतले खुद मुनाफा आर्जन वृद्धि गरेको छ । कर्जा असुलीमा धेरै नै सन्तोषजनक स्थिती आएकोले पनि मुनाफा अर्जानमा वृद्धि आएको हो । फेरि अहिले वाणिज्य बैकहरुको कर्जा प्रवाह तथा लगानीको वृद्धिदर पनि बढ्दै गएको छ । मुलुकमा लगानीको अवसरको बाटो केहि खुले जस्तो अनुभव हुन थालेको छ । त्यसैले पनि अहिले बैंकहरुमा रहेको अधिक तरलता सहज बन्दै गएको स्थिति छ ।